Posted by သက်ဝေ at 2:04 PM
တန်ခူး July 3, 2008 at 2:29 PM
ဟီးဟီး…သက်ဝေရေးထားတာ ဖတ်ပြီး သီချင်းနားမထောင်ခင်ထဲက ဒီအဆိုတော်ပဲ ဖြစ်မယ်လို့ တော့ထင်သား….အဲဒီ သီချင်းနှစ်ပုဒ်လုံးကို အရမ်းကြိုက်တယ်…ဒါပေမယ့် ဒီversionကြီးတော့မဟုတ်ဘူး… ဘာကြောင့်မကြိုက်လဲ ဆိုတော့ လွမ်းရတော့မလိုလို ထပဲကရတော့မလိုလိုနဲ့ … တမျိုးကြီးပဲ… ထွင်တိုင်းမကောင်းဘူးလေ… အရင်သီချင်းကို ဖျက်ပစ်လိုက်သလိုပဲ…. ထီသည်တွေကတော့ ကြိုက်မှာပါ…
ဇနိ July 3, 2008 at 6:10 PM
kay July 3, 2008 at 8:58 PM
ဘာ ပြော ရ မှန်း တောင် မသိ ဘူး..း)
အမှန် အတိုင်း ပြော ရင်..လုံးဝ မကြိုက်ဘူး.. ထိုင်မသိမ်း မင်းသမီး ၀တ် စုံ နဲ့.. ဘရိတ်ဒန့်စ် က သလို ဖြစ်နေတယ်..ကလက်တက် တက် နဲ့..
မူလ အနု ပညာ တွေ လည်း ပျောက် ကုန်တယ်.. သူတို့ဟာ.. ဆန်းသစ် တာ ထက်..ဖျက်ဆီး တယ်လို့ ပဲ..ပြောချင် တော့တယ်။ ဒါက..ရောသမမွှေ နဲ့လည်း..မတူ ပြန်ဘူးလေ။
မန္တလေး က..တေးရေး ဆရာ ဦးဘသိန်း ဆုံးတော့..သူ့သီချင်း တွေကို..လုံးဝ မူပိုင် ခွင့် မထားပဲ..ကြိုက်တဲ့သူ ဆို နိုင် တယ်..ဒါပေမဲ့..ဘာမှ မပြောင်းလဲ ပြစ် ရဘူး လို့.. အသေ အချာ မှာ ခဲ့တယ်တဲ့။
ဒါမဲ့လည်းလေ..လူတကိုယ်..အကြိုက် တမျိုးပေါ့..ကိုဇနိ က ကြိုက်တယ်ဆိုတော့..ကိုယ်ရှိန်နဲနဲ သပ်ထားမှ..း)
nu-san July 3, 2008 at 9:42 PM
သက်ဝေရေ.. အခုလိုဆိုထားတာ လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ နားထဲကို ကန့်လန့်ကြီးဝင်လာသလိုပဲ။ ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး။ သီချင်းနားထောင်ရင်း အရင်မူရင်းသီဆိုသူတွေရဲ့ အသံကို ပြန်ကြားယောင်ပြီး အခုလို ဆိုပစ်လိုက်တာ နှမြောနေမိတယ်။ မွေးဌာနီသီချင်းဆို ဦးသန်းထွန်းလေး ဆိုထားတာကို နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ်.. ပိုးအိစံဆိုတော့လည်း နားထောင်လို့ရသေးတယ်။ အခုလို ဆိုထားတာကို နားထောင်လို့ မရဘူး။ စကားဝါမြေသီချင်းရောပဲ။ ကိုယ်တွေက လူလတ်ပိုင်းဖြစ်လို့လားမသိဘူးနော်။ အရင်သူတွေ ဆိုထားတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ အေးအေးလေးဆိုရင် အရမ်းနားထောင်လို့ကောင်းမယ့် သီချင်းတွေ....
ပို့စ်ကိုလာဖတ်ပြီးတော့ သီချင်းကို download လုပ်ရတယ်။ နောက် ဖွင့်လိုက်တော့ အမျိုးသားက “ဟဲ့.. ဘာသီချင်းတွေ ဖွင့်နေတာလဲတဲ့..” ။
Sonata Cantata July 3, 2008 at 11:18 PM
Emotion နဲ့ Rhythm က လွဲနေတယ်။ မူရင်းသီချင်းက ပေးချင်တဲ့ Message က ပျောက်သွားပြီ။ ရသကို ဘယ်မှာရှာရမလဲ။ တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်က ပြောဖူးတယ်။ Abstract ဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်တတ်အောင် Concrete ဖြစ်တဲ့ မြေစာမြက်ကလေး, ကုက္ကိုပင်လေးကစပြီး ဧရာဝတီမြစ် ချစ်ကြအောင် လုပ်ပေးကြရမယ်တဲ့။ လှည်းလမ်းကြောင်း တစ်လျှောက် တလိမ့်လိမ့်တက်နေတဲ့ ဖုန်လုံးကြီးတွေကိုတောင် လွမ်းစရာ အဖြစ် ချစ်ရတဲ့ မွေးဌာနီ ဟေ့ စိန်လား ဟေ့ မြလား ဟေ့ မောင်တို့ နဲ့ သွားပါပြီ...ကယ်တော်မူကြပါ။
Dr. Yi Yi Win July 6, 2008 at 1:29 AM
သူတို့ ဆိုချင်တဲ့ Rhythm နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် စာသားတွေခက်ခက်ခဲခဲမရှာနိုင်တော့တာနဲ့ ပဲ
အဟောင်းတွေကို ပြန် modify လုပ်လုပ်ဆိုနေကြတာကိုက သူတို့ ရဲ့ စတိုင်လ် သစ်ဖြစ်နေ
တာ။ သီချင်းဟောင်းတွေကို ကြိုက်သူတွေအဖို့ တော့ ဒီလို ပေါ့တော့တော့ဖြစ်သွားတာမ
ကြိုက်ကြပါဘူး။ ခောတ်လူတွေကတော့ ဒီသီချင်းတွေဟာ အဟောင်းတွေရှိခဲ့မှန်းတောင်
သိကြမယ်မထင်ပါဘူး။ တို့ လည်း အဟောင်းလေးတွေကို အဟောင်းအတိုင်းပဲနှစ်သက်
diLo July 9, 2008 at 1:54 PM
me dnload and listened to the songs!
em..a bit funi and feel sth is not right..
sth new pop..hoat la
သက်ဝေ July 14, 2008 at 1:07 PM
ဒီသီချင်းတွေကို နှစ်သက်သောသူများ၊ မနှစ်သက်သောသူများ၊ အသစ် အဆန်း တစ်ခုအနေနဲ့နားထောင်ခဲ့ကြသူများ နှင့် Comment များ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရေးပေးခဲ့ကြသူများအား ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါ၏။
ကိုလင်း November 13, 2008 at 1:23 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သက်ဝေ ခင်ဗျာ...
"စကားဝါမြေ" ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက နားထောင်လို့ တော့ကောင်းပါတယ်...
ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုဆိုတော့လည်း ပုံစံအသစ်ကလေးနဲ့နားထောင်ရတာပေါ့...